#TACSI GUDDOOMIYE Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehelka iyo asxaabta uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Maxamuud Cismaan Aw Dayuur.
Friday May 21, 2021 - 21:51:32
Date:21ka May 2021ka
Guddoomiyaha xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) isaga oo ku hadlaya magaciisa, ka hoggaanka, fulinta, garabbada dhallinyarada iyo haweenka ee Xisbiga WADDANI waxa uu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyska, ehelka iyo asxaabta uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Maxamuud Cismaan Aw Dayuur.
Guddoomiyuhu waxa uu geerida marxuumka si gaar ah uga tacsiyaya Sheekh Shucayb Maxamuud Cismaan oo marxuumku aabbihii ahaa iyo guud ahaan qoyska iyo asxaabta uu ka baxay.
Guddoomiyuhu waxa uu Marxuumka Illaahay uga baryaya in uu su'aasha u fududeeyo, una dambi dhaafo, Jannatul Firdowsana ka waraabiyo, qoyska, ehelka, qaraabada iyo asxaabta uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiq ah ka siiyo.
12/06/2021 - 19:33:16
Xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ayaa Munaasibad qado sharaf ah u sameeyey xildhibaannada ka soo baxay goleyaasha deegaanka ee degmada Hargeisa iyo degmada Burco ee xisbiyada UCID iyo WADDANI.
10/06/2021 - 19:26:42
TACSI GUDDOOMIYE Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehelada iyo asxaabta ay ka baxday Alle ha u naxariistee marxuumad Caasha Xuseen Maxamed oo magaalada Hargeysa ku geeriyootay.
07/06/2021 - 19:08:01
Isbahaysiga Xisbiyada Mucaaradka ah ee UCID iyo WADDANI ayaa saaka Shirkii ugu horreeyey ku yeeshay Magaalada Hargeysa.
06/06/2021 - 16:44:33
Hoggaanka Xisbiyada mucaaradka Somaliland ee WADDANI iyo UCID ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ay ku hananayaan hoggaaminta Golaha Wakiillada iyo maayarrada magaalooyinka dalka.
01/06/2021 - 11:04:42
#TACSI GUDDOOMIYE Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro oo tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ehelka, asxaabta, Waayeelka, waxgaradka, bahda dhaqanka iyo bulshada reer Togdheer ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Marxuum Boqor Saleebaan Cabdillaahi Xandulle (Boqor Gaacir).
12/06/2021 - 08:10:25
Isbahaysiga Xisbiyada Mucaaradka Somaliland oo heshiis ka gaadhay Hoggaanka Degmada Burco.